Ogaden News Agency (ONA) – Dhimashada Zinawi waxay u horseedi kartaa Itobiya fursad cusub
Dhimashada Zinawi waxay u horseedi kartaa Itobiya fursad cusub
War-murtiyeed ay maanta oy taariikhdu tahay 21-08-2012 soo saartay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayay ku tilmaanta in geerida KT Meles Zanawi ay fursad cusub oo nabad iyo xasilooni ah ay ku soo dabaali karto Itobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Waxay JWXO sheegtay in mudadii uu maamulka KT Zinawi xukunka hayay uu kala kulmay shacabka Ogadenya dhibaato aan la malayn karin oon xukuumadihii ka horeeyay aanay u gaysan. Waxaa kaloo uu dagaalo iyo xasilooni darro ku abuuray Geeska Afrika suu gobolka ugu amar ku-taagleeyo.
Waxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya sheegtay inay tahay fursad ay xukuumadda badali doonta ay ku abuurto waaya cusub oo u horseeda Ogadenya nabad, xasilooni, xoriyad iyo cadaalad hadii aanay daba galin siyaasadii fashilantay ee maamulkii Meles.
Waxay sheegtay JWXO inay halganka xaqqa ah ee aaya-katashiga shacabka Ogadenya ay wadi doonaan, isla marahaantaana ay soo dhaweynayaan xoogagga mucaaradka ah ee horusocdka ah ee maskaxda furan ee diyaarka u ah inay aqoonsadaan xaqqa ay umadaha u leeyihiin aay-katashigooda.
Ugu dambayntii waxay JWXO ugu baaqday mujtamaca dawliga inay horumariyaan siday Itobiya uga hirgali lahayd dimoqraadiyadda iyo xoriyadda intay badhi-gantaali lahayeen diktaatooriyadda.
Jabhadda Wadanid Xoreynta Ogadenya.